Su'aalaha Guud - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Su'aalaha Soosaarida PCB:
Muxuu qabtaa PCBFuture?
PCBFuture waa soo saare caalami ah oo xirfadle ah oo bixiya been abuur PCB, isku imaatinka PCB iyo adeegyada kaabaya qaybaha.
Noocee ah looxyada PCB-ga aad soosaarto?
PCBFuture wuxuu soo saari karaa noocyo badan oo PCB-yada ah sida PCB-yada hal-laba-geesood ah, PCB-yada badan, PCB-ga adag, PCBs Flexible iyo PCB-yada adag.
Ma haysaa tirada ugu yar ee amar ah (MOQ) ee amarada PCB?
Maya, MOQ-ga wax soo saarka PCB waa 1 gabal.
Ma siisaa Muunado PCB Bilaash ah?
Haa, waxaan bixinnaa shaybaarro PCB oo Bilaash ah, qty-na kama badna 5 kumbiyuutar. Laakiin waxaan u baahanahay inaan ka qaadno shaybaarka marka hore, oo aan soo celino qarashka muunada PCB ee wax soosaarkaaga tiro haddii muunadaada ay qiimeyso aan ka badneyn qiimaha waxsoosaarka tirada ee 1% (Aan ku jirin xamuulka)
Sideen ku heli karaa xigasho deg deg ah?
Waxaad u diri kartaa feylasha emailkeena iibka ah @ pcbfuture tixraac ahaan, waxaan kuu soo xigan karnaa 12 saacadood sida caadiga ah, ugu dhaqsaha badan wuxuu noqon karaa 30 daqiiqo.
Miyaan sameyn karaa looxyadayda oo lagu farsameeyo balastarrada?
Haa, waxaan la shaqeyn karnaa hal feylal oo PCB ah oo waxaan soosaari karnaa sabuurada.
Kaliya ma dhigi karaa amarka PCB-ga qaawan?
Haa, waxaan kaliya ku siin karnaa adeegga wax soo saarka PCB macaamiisheena.
Maxaad u isticmaashaa adeegga qiimaha internetka
Xigashada PCB-ga ee kaliya waxay u shaqeysaa qiime adag iyo waqtiga hogaaminta, waxaan ku qiimeyneynaa wax soo saarka PCB tayo sare leh, sidaas darteed baaritaanka DFM iyo saxsanaanta faahfaahsan ayaa muhiim ah. Waxaan ku adkeysaneynaa isku darka mashiinka iyo shaqada gacanta si loo yareeyo khatarta nashqadeynta macaamiisha.
Sidee loo tiriyaa waqtiga hogaaminta ee wax soo saarka PCB?
Waqtiga hogaaminta amarka PCB waa la tirin doonaa kadib marka la xaliyo dhamaan EQs-ka been abuurka PCB. Amarada soo noqoshada ee caadiga ah, ka xisaabi maalinta xigta ee shaqada sida maalinta koowaad.
Ma haysataa DFM oo ka hubinaysa qaabkeenna?
Haa, waxaan ku bixin karnaa adeegga DFM oo bilaash ah dhammaan amarrada.
Su'aalaha Golaha PCB ee Turnkey
Ma bixisaa nooca PCB nooc (mug hoose)?
Haa, waxaan ku siin karnaa adeegga kumbuyuutarrada kumbuyuutarka PCB-ga iyo MOQ waa 1 gabal.
Faylasha noocee ah ayaad ugu baahan tahay amarrada isku-darka PCB?
Caadi ahaan, waxaan ku soo qaadan karnaa qiimaha adiga kugu saleysan faylasha Gerber iyo liiska BOM. Hadday suurogal tahay, Xullo oo meel dhig faylasha, sawirka isku imaatinka, shuruudaha gaarka ah iyo tilmaamaha si ka wanaagsan in aad annagana noo ilaaliso.
Miyaad siisaa adeeg goyn PCB nooc ah oo bilaash ah?
Haa, waxaan bixinaa adeeg goyn ah oo lacag la'aan ah PCB, qty-na kama badna 3 kumbiyuutar. Laakiin waxaan u baahanahay inaan ka qaadno shaybaarka marka hore, oo aan soo celino qarashka muunada PCB ee wax soosaarkaaga tiro haddii muunadaada ay qiimeyso aan ka badneyn qiimaha waxsoosaarka tirada ee 1% (Aan ku jirin xamuulka)
Waa maxay faylka Xulista iyo Meelku (faylka Centroid)?
Faylka soo qaado iyo meesha sidoo kale waxaa loo yaqaan faylka Centroid. Xogtan, oo ay ku jiraan X, Y, wareega, dhinaca guddiga (dhinaca ama qeybta hoose) iyo naqshadeeyaha tixraaca, waxaa akhrin kara SMT ama mashiinnada isku-darka daloolka.
Miyaad bixisaa adeegga isku-xirka PCB-ga?
Haa, waxaan bixinaa adeegga isku-xirka PCB-ga ee loo yaqaan 'turnkey PCB', oo ay ku jiraan wax soo saarka looxyada wareegga ah, Qaybaha Sourcing, Stencil, iyo PCB Population iyo baaritaanka.
Waa maxay sababta qaar ka mid ah qiimayaasha ka imanaya ay kaaga sarreeyaan kuwa haddii aan annaga iibsanno?
Qaybaha elektiroonigga ah ee loo dhoofiyo Shiinaha waa inay ku daraan 13% VAT qaarna waa in lagu soo oogaa Tariif, taas oo ka duwan HS nambarka qayb kasta.
Maxay tahay sababta qaar ka mid ah qiimaha ka imaadku kaaga hooseeyo qiimaha ka muuqda bogagga shabakadaha?
Waxaan la shaqeynaa shirkado caan ah oo caan ah sida Digi-Key, Mouse, Arrow iyo wixii la mid ah, illaa iyo inta qaddarkayaga iibsashada sanadlaha ah, waxay na siinayaan qiimo dhimis aad u hooseysa.
Mudo intee le'eg ayaad u baahan tahay inaad sheegto mashaariicda Turnkey PCB?
Guud ahaan waxay nagu qaadataa 1-2 maalmood oo shaqo ah inaan soo sheegno mashaariicda shirarka. Haddii aadan helin qormadeena, waad hubin kartaa sanduuqa emaylkaaga iyo faylka jun wixii emayl ah ee nalaga soo diro. Haddii aysan jirin emayl noo soo diray, fadlan labalaab la xiriir sales@pcbfuture.com wixii caawimaad ah.
Ma hubin kartaa tayada qaybaha kombuyuutarradeena PCB?
Khibrad sannado leh, PCBFuture waxay dhisteen kanaal lagu kaydin karo kanaal caalami ah oo si wanaagsan u yaqaan qeybiyeyaasha ama soo saarayaasha. Waxaan ka heli karnaa taageerada ugu fiican iyo qiimo fiican iyaga. Waxaa intaa dheer, waxaan haynaa koox tayo leh oo kormeerta iyo xaqiijinta tayada qaybaha. Waad ku nasan kartaa tayada qaybaha.
Ma heli karaa koontada amaahda?
Macaamiisha muddada-dheer ee nala shaqeeya wax ka badan lix bilood iyo amarro isdaba-joog ah bil kasta, waxaan ku siineynaa koontada amaahda shuruudaha bixinta 30-maalmood. Faahfaahin dheeri ah iyo xaqiijin, fadlan nala soo xiriir si dhakhso leh ayaan dib kuugu soo laaban doonnaa.